On1.click | ချီလွန်းဂိုမြစ်
... ွန်းဂိုမြစ်(ပေါ်တူဂီ: Rio Chiluango၊ကာကွန်ဂိုမြစ်, လော့အန်းဂို ၊ ရှီလွန်ဂို နှင့...
ချီလွန်းဂိုမြစ် (ပေါ်တူဂီ: Rio Chiluango ၊ကာကွန်ဂိုမြစ်(Kakongo River), လော့အန်းဂို(Louango)၊ ရှီလွန်ဂို(Shiloango) နှင့် ဟိုင်းမြစ်(Rio Hi) )သည် ဗဟိုအာဖရိကဒေသအနောက်ပိုင်းတွင်ရှိသော မြစ်တစ်စင်းဖြစ်သည်။ ထိုမြစ်သည် ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနှင့် ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံတို့ကြား နှစ်နိုင်ငံနယ်ခြားမျဉ်း၏ အနောက်ဘက်စွန်းအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်တည်ရှိနေသည်။ ထို့ပြင် ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနှင့် အင်ဂိုလာနိုင်ငံ၊ ကာဘင်ဒါပြည်နယ်အကြား နယ်ခြားမျဉ်းလည်းဖြစ်ပြီး နဲကူတိုမြို့တောင်ဘက်မှဖြတ်သန်းစီးဆင်းသည်။ မြစ်သည် ကာဘင်ဒါပြည်နယ်ကို နှစ်ခြမ်းခွဲသွားပြီး ထိုပြည်နယ်၏ အရေးပါသော မြစ်တစင်းဖြစ်လာစေသည်။ ထို့နောက် ကာကွန်ဂိုမြို့မြောက်ဘက်နားမှနေ၍ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းသို့ စီးဝင်သည်။  
↑ Chiloango River (Variant) at GEOnet Names Server, United States National Geospatial-Intelligence Agency
↑ Chiluango, Rio (Approved - Angola) at GEOnet Names Server, United States National Geospatial-Intelligence Agency
↑ Kakongo River (Variant) at GEOnet Names Server, United States National Geospatial-Intelligence Agency
↑ Louango (Approved - Congo, Republic of the) at GEOnet Names Server, United States National Geospatial-Intelligence Agency
↑ Shiloango (Approved - Congo, Democratic Republic of the) at GEOnet Names Server, United States National Geospatial-Intelligence Agency
↑ Hi, Rio (Variant) at GEOnet Names Server, United States National Geospatial-Intelligence Agency
↑ International Boundary Study No. 105 – October 15, 1970: Angola (Cabinda) – Republic of the Congo (Brazzaville) Boundary Archived June 7, 2011, at the Wayback Machine. The Geographer, Office of the Geographer, Bureau of Intelligence and Research, U.S. State Department, Washington, D.C.
↑ Frenken, Karen (1997) Irrigation potential in Africa: A basin approach (FAO Land and Water Bulletin 4) Land and Water Development Division of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. Italy, www.fao.org "Table 71 Rivers and discharges", ISBN 92-5-103966-6
↑ United States. Hydrographic Office (1916) Africa Pilot: The southewest coast of Africa from Cape Palmas to the Cape of Good Hope, including the islands of St. Helena, Ascension, Tristan da Cunha, and neighboring islands Hydrographic Office, Washington, D.C., volume 1, page 346 OCLC 62355097
ကိုဩဒိနိတ်: 5°11′41″S 12°7′48″E / 5.19472°S 12.13000°E / -5.19472; 12.13000
ဤ ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံရှိ မြစ်တစင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
ဤ ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရှိ မြစ်တစ်စင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။